Asia Travel - ခရီးသွားသတင်းများ ခရီးသွားသတင်း (စာမျက်နှာ ၂)
ဤကြောက်မက်ဖွယ်ကောင်းသော ၂၀၂၀ သည်အဆုံးသတ်သွားပြီဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ယခုရောဂါကူးစက်မှုကိုနောက်ကွယ်မှနှင့်စွန့်ခွာမည်ဟုမျှော်လင့်နိုင်သည်။
Vladivostok သည်တရုတ်၊ မြောက်ကိုရီးယားနှင့်နယ်နိမိတ်ချင်းထိစပ်နေသောရုရှားနိုင်ငံဖြစ်သည်။ အဲဒါ ...
Ural တောင်ကိုဥရောပနှင့်အာရှအကြားသဘာဝနယ်နိမိတ်အဖြစ်သတ်မှတ်သည်။ သူတို့သည်လှပသောတောင်များဖြစ်ကြသည်။
တရုတ်သည်ယနေ့ကမ္ဘာပေါ်တွင်စိတ်ဝင်စားစရာအကောင်းဆုံးနိုင်ငံတစ်နိုင်ငံဖြစ်သည်။ အရင်ကမဟုတ်ခဲ့ပေမယ့် ...
ထိုင်းသည်အရှေ့တောင်အာရှအားလပ်ရက်အပန်းဖြေခရီးစဉ်ကိုစီစဉ်သည့်အခါခရီးသွားများအတွက်နှစ်သက်သောနေရာတစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းကို ...
မွန်ဂိုလီးယား။ နာမတော်တစ်ခုတည်းကသာကျွန်ုပ်တို့ကိုဝေးလံခေါင်ဖျားသော၊ ဒါဟာမပါဘဲကြီးမားတဲ့နိုင်ငံတစ်ခုပါ
အအေးလွန်ကဲသည့်နေရာကိုသင်မြင်ယောင်ကြည့်နိုင်သလော။ အဘယ်သူမျှမကအာတိတ်သို့မဟုတ်အန္တာတိကမဟုတ်ပါဘူး။ အကြောင်းပါ။
ကမ္ဘာကြီးသည်ကြီးမားပြီးလည်ပတ်ရန်နေရာများစွာရှိသည်။ အကယ်၍ ကျွန်ုပ်တို့သည်အမေရိက၊ ဥရောပနှင့်လူသိအများဆုံးလူသိများလျှင် ...
အိုမန်ကိုသွားဖို့သင်ဘာထင်သလဲ ခရီးသွား dest ည့်သည်များအများဆုံးစာရင်းတွင်မပါ ၀ င်ပါ။
ဗီယက်နမ်သည်ယနေ့အရှေ့တောင်အာရှတွင်အပြည့်စုံဆုံးနေရာတစ်ခုဖြစ်သည်။ အင်ဒိုချိုင်းနားရှိထူးခြားဆန်းပြားသောနိုင်ငံတစ်ခု ...
သမိုင်းကြောင်းတစ်လျှောက်တွင်လူအများသိရှိပြီးဖြစ်သောကြောင့် "အမည်တစ်ထောင်ကျွန်း" ဟုလူသိများသည်။
အရှေ့တောင်အာရှသည်ကမ္ဘာပေါ်ရှိအကောင်းဆုံးကမ်းခြေများနှင့်ကျွန်းများရှိရာနေရာဖြစ်သည်ဟုဆိုကြသည်။ ဒါဟာ ဦး တည်ရာတစ်ခုဖြစ်သည် ...
များစွာသောသူတို့သည်စိန့်ပီတာစဘတ်သည်ရုရှားသို့လာရောက်လည်ပတ်သည့်တစ်ခုတည်းသောအကြောင်းပြချက်ဖြစ်သည်။ သမိုင်းဝင်ပြီးအလွန်လှပသောဤ ...
Halong Bay သည်ဗီယက်နမ်နိုင်ငံတွင်တည်ရှိပြီးအရှေ့တောင်အာရှတွင်လူကြိုက်အများဆုံးနေရာတစ်ခုဖြစ်သည်။ ကျောပိုးအိတ် ဦး တည်ရာနှင့် ...
ဗီယက်နမ်နိုင်ငံတွင်အလှပဆုံးနေရာတစ်ခုမှာရှေးဟောင်းမြို့တစ်မြို့ဖြစ်သည့် Hue မြို့ဖြစ်သည်။
သီရိလင်္ကာသည်ထင်ရှားသော Lonely Planet ခရီးသွားကြေညာသူ ၂၀၁၁ ၏ကြယ်ပွင့်နေရာအဖြစ်ရွေးချယ်ခဲ့သည်။
နယူးဒေလီသည်ဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်သောမြို့တစ်မြို့ဖြစ်သည်။ ဒါပေမယ့်, အားလုံးအထက်, အံ့သြဖွယ်အထိမ်းအမှတ်အဆောက်အ ဦး များနှင့်အရသာ gastronomy ရှိခြင်းသည်။
ဂျော်ဒန်နိုင်ငံရှိ Aqaba မြို့တွင်ပင်လယ်ကိုကြည့်ရှုနိုင်သောတစ်ခုတည်းသောအရာမြင်နိုင်သမျှအရာအားလုံးအားကျွန်ုပ်တို့ပြောပြပါမည်။
ကမ္ဘောဒီးယားသည်အရှေ့တောင်အာရှတွင်တည်ရှိပြီးနိုင်ငံနှင့်ခရီးသွား tourist ည့်ပုလဲများထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်။
အိန္ဒိယသည်စကားလုံးများဖြင့်ဖော်ပြရန်ခဲယဉ်းပြီးသင့်ကိုလျစ်လျူရှုမထားနိုင်သည့်နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံဖြစ်သည်။ အဲဒီမှာသွားဖို့လိုတယ် ...
အိန္ဒိယဟာအံ့သြစရာကောင်းတဲ့နေရာတစ်ခုဖြစ်တယ်။ လူတိုင်းအတွက်မဟုတ်ပါ၊ သို့သော်အိန္ဒိယသို့သွားခြင်းသည်ဘဝကိုပြောင်းလဲစေသည်ဟုလူအများကပြောကြသည်။
အဘယ်အရာကို Ulaanbaatar တွင်ကြည့်ရှုပါ
မွန်ဂိုလီးယား၏မြို့တော် Ulaanbaatar သည်လူအများစုအိပ်မက်မက်သည့်နေရာများစာရင်းတွင်မဖြစ်နိုင်ပါ။
Krabi, ထိုင်းမှာအံ့ wonder ခြင်း
အရှေ့တောင်အာရှသည်ကျောပိုးအိတ်များ၊ အာရှဇိမ်ခံပစ္စည်းများနှင့်မယုံနိုင်လောက်အောင်ရှုခင်းများကိုနှစ်သက်သူများအတွက်သံလိုက်ဖြစ်သည်။ ဒါပေမယ့်ဘာလို့အမြဲတမ်း ...
Hoi An, ဗီယက်နမ်၏ပုလဲ
အဘယ်အရာကို Maldives ရှိ Maafushi တွင်ကြည့်ရှုရန်
ပင်လယ်ရေကြောင်းကမ်းခြေများနှင့်အတူခရီးသွား very ည့်အလွန်များသောမော်လဒိုက်inရိယာရှိ Maafushi ကျွန်းတွင်သင်ဘာလုပ်နိုင်သည်ကိုသင်ပြောပြပါမည်။
အိန္ဒိယရှိ Khajuraho ၏ခေါ်ဆောင်သွားဗိမာန်များ
Ninh Binh သည်ဗီယက်နမ်နိုင်ငံရှိပရဒိသုဖြစ်သည်
အာရှသည်အံ့သြဖွယ်ကောင်းသောခရီးသွားနေရာတစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းတွင်အရာအားလုံး၊ သမိုင်း၊ ရှုခင်းများ၊ ယဉ်ကျေးမှု၊
ကမ္ဘာပေါ်တွင်အရှားပါးဆုံးနေရာတစ်ခုမှာပင်လယ်သေဖြစ်သည်။ အကယ်စင်စစ်သင်သည်သူ့အကြောင်းကိုကြားသိနှင့်ရှိသည် ...
ဂျပန်၏သင်္ကေတမှာဖူဂျီတောင်ဖြစ်သည်။ manga၊ anime သို့မဟုတ်ဂျပန်ရုပ်ရှင်ရုံများ၏ပရိသတ်များက၎င်းကိုသိသည်။
ဂျေရုဆလင်၏ဗလီဝတ်ကျောင်းများ၏ Esplanade တွင်မြင့်မြတ်သောအစ္စလာမ်ဘုရားရှိခိုးကျောင်း၏ကျောက်ဆောင်အမိုးသည် ...
ကမ္ဘောဒီးယားတွင်လူကြိုက်အများဆုံးနှင့်လှပသောခရီးသွား attractions ည့်ဆွဲဆောင်များထဲမှတစ်ခုမှာမိုးသစ်တောများကိုမျိုချနေသောကျောက်ဆုပ်ကိုင်ထားသော Angkor ဘုရားကျောင်းများဖြစ်သည်။ ပိရမစ်များ! Egipt ၏!
ကျွန်ုပ်တို့၏ကမ္ဘာဂြိုဟ်သည်ရှည်လျားပြီးကွဲပြားခြားနားသောသမိုင်းကြောင်းရှိသည်။ ဖန်ဆင်းခြင်း၏အောင်မြင်ခြင်းကိုကျွန်ုပ်တို့ယုံကြည်သော်လည်းအမှန်တရားမှာကျွန်ုပ်တို့သည်တစ်ချိန်ချိန်တွင် Komodo နဂါးများကိုပင်မသိသေးပါ။ အင်ဒိုနီးရှားကျွန်းများပေါ်တွင်နေထိုင်သော Gigantic တွားသွားသတ္တဝါ။ သငျသညျသဘောသဘာဝကိုကြိုက်လျှင် site ကိုလှပသောဖြစ်ပါတယ်။
တောင်ကိုရီးယားသည်လူကြိုက်များသောယဉ်ကျေးမှု၏ကမ္ဘာ့မြေပုံတွင်ယခုအချိန်သည်ဆယ်စုနှစ်တစ်ခုမျှကြာပြီဖြစ်သည်။ အဘယ်ကြောင့်? မင်းရဲ့ဂီတစတိုင်ကြောင့်မင်းတောင်ကိုရီးယားကိုသွားနေသလား။ မင်းကဒရာမာနဲ့ k-pop ကိုကြိုက်တယ်၊ ဒါပေမဲ့မင်းအဲဒီမှာမသွားခင်ကိုရီးယားရိုးရာဓလေ့ထုံးတမ်းတွေအကြောင်းလေ့လာကြည့်ရအောင်။
ယဉ်ကျေးမှုအရရော၊ ၎င်း၏နယ်နိမိတ်အတွင်းငါးဆယ်ထက်ပိုနေထိုင်ကြသည် ...
ဂျပန်သည်ကျွန်ုပ်အကြိုက်ဆုံးနေရာတစ်ခုဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်ဇာတိနိုင်ငံနောက်ကွယ်ရှိကမ္ဘာပေါ်တွင်ကျွန်ုပ်၏နေရာကိုပြောနိုင်ခဲ့သည်။ ငါဟာဂျပန်ကိုအရမ်းချစ်တဲ့အတွက်ပြီးခဲ့တဲ့သုံးနှစ်အတွက်ငါအားလပ်ရက်ခရီးထွက်ခဲ့ဖူးတယ်။ ထိုအခါ၎င်းတို့မည်သို့တုံ့ပြန်ရမည်ကိုသိရှိရန်အရေးကြီးဆုံးဂျပန်ဓလေ့ထုံးစံများကိုရှာဖွေပါ။ ပြီးတော့သင်မလုပ်နိုင်တာတွေ!
ထိုင်းနိုင်ငံ၏အကောင်းဆုံးကမ်းခြေများမှာမည်သည့်နေရာတွင်ရှိသည်ကိုရှာဖွေပါ။ သင်သည်ဤလှပသောတိုင်းပြည်၊ အလုပ်ရှုပ်ဆုံးမှပျက်စီးခြင်းသို့ရောက်သောခရီးစဉ်ကိုမမေ့သင့်ပါ။
ဗီယက်နမ်၏ခရီးသွား p ည့်ပုလဲများထဲမှတစ်ခုမှာမဲခေါင်မြစ်ဝကျွန်းပေါ်ဒေသဖြစ်သော်လည်းလာရောက်လည်ပတ်သင့်သလောသို့မဟုတ်အလွန်တန်ဖိုးထားပါသလား။ ဤတွင်သတင်းအချက်အလက်, အကြံပေးချက်များနှင့်အချို့သော ဦး တည်ရာ။
ဂျပန်ယဉ်ကျေးမှုသည်အံ့သြစရာကောင်းလောက်အောင်အံ့သြစရာကောင်းပြီးတိုင်းပြည်သို့သွားရောက်ရန်ဆုံးဖြတ်သောအခါမည်သူမျှယင်းကိုလျစ်လျူရှုထားကြသည်။ သင် ဦး ညွှတ်ရန်, သင်၏ဖိနပ်ကိုချွတ်ခြင်းနှင့် otaku ယဉ်ကျေးမှုနေထိုင်ဝံ့?
Wadi Rum, ဂျော်ဒန်သဲကန္တာရသို့အလည်အပတ်ခရီး
Wadi Rum သဲကန္တာရသည်ဂျော်ဒန်တွင်တည်ရှိပြီးလှုပ်ရှားမှုများစွာပြုလုပ်ရန် Petra ပြီးနောက်သဲကန္တာရတစ်ခုဖြစ်သည်။
ထိုင်းသည်အံ့ is ဖွယ်ရာကောင်းသည်။ ထို့ကြောင့်ယဉ်ကျေးမှုကိုသင်ကြိုက်နှစ်သက်ပါကဘန်ကောက်နှင့်အလွန်နီးကပ်သော Ayuttahaya အပျက်အစီးများကိုမမေ့ပါနှင့်။ နန်းတော်များ၊ ဘုရားကျောင်းများ၊
တရုတ်ပြည်မှာထူးဆန်းတဲ့မြေကွက်ကိုမြင်ချင်ပါသလား။ Entocnes သည်စီချွမ်သို့သွားပြီး Huanglong သို့ရောင်စုံရေကန်များ၊ ရေပူစမ်းများ၊ သစ်တောများ၊
ဂျပန်နိုင်ငံ၏မြောက်ဘက်တွင်ရှိသော Sapporo ဖြစ်သည်
ဂျပန်မြောက်ပိုင်းသည်မကြာခဏဖြစ်သော်လည်းအလွန်လှပသည်။ Sapporo သည်သင့်အား၎င်း၏တောင်တန်းများ၊ နှင်းထုပန်းချီများ၊ သစ်တောများနှင့်လာဗင်ဒါလယ်ကွင်းများဖြင့်သင့်ကိုစောင့်မျှော်နေလိမ့်မည်။
ဟုတ်ကဲ့သို့မဟုတ်ဟုတ်သည်ကိုသိလိုလျှင်ဂျပန်အလယ်ခေတ်အားကျဖွယ်ရာကောင်းသောကာနဇာဝါမြို့တော်သို့လည်ပတ်ရမည်။ ရဲတိုက်, ဗိမာန်တော်, ninjas, samurais ။
တရုတ်နိုင်ငံတွင်အံ့သြဖွယ်ကောင်းသော Mega တည်ဆောက်မှု ၈
စိန့်ပီတာစဘတ်မပါဘဲရုရှားသို့ခရီးစဉ်မရှိ။ ထို့အပြင်စိန့်ပီတာစဘတ်မြို့ကို၎င်း၏အကောင်းဆုံးနန်းတော်များမလှည့်ဘဲသွားရောက်လည်ပတ်ခြင်းလည်းမရှိပါ။ ရည်ရွယ်!
အမျိုးသားများနှင့်အမျိုးသမီးများအတွက် Doha ရှိ Nightlife
ကာတာနိုင်ငံ၏မြို့တော်ဒိုဟာ၌ညတွင်းချင်းအိပ်မက်များစွာရှိသည်။ ထို့ကြောင့်သင်ခရီးထွက်လျှင်အရက်ဆိုင်များ ၀ တ်ဆင်။ ၀ တ်ရုံသို့သွားရန်နှင့်ကခုန်ရန်မတွန့်ဆုတ်ပါနှင့်။
Ulan Bator, ဝေးလံသောခရီးသွားလုပ်ငန်း
သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်ကသူမသည်ထူးခြားဆန်းပြားသောနေရာများကိုနှစ်သက်ကြောင်းနှင့်သူသည် Ulan လမ်းမများတွင်ပျောက်ဆုံးရန်သေလုမျောပါးဖြစ်နေကြောင်းပြောခဲ့သည်။
ဘာလို့တောင်ကိုရီးယားကိုဆိုးလ်နဲ့စတာလဲ။ မြို့တော်သည်ခေတ်မီ။ နာမည်ကြီးပြီးယဉ်ကျေးမှု၊ သမိုင်း၊ အနုပညာ၊
Xian ၏စစ်သည်များသည်လူ ဦး ရေခြောက်သန်းကျော်၏ဤတရုတ်မြို့၏အဓိကခရီးသွား attr ည့်ဆွဲဆောင်ဖြစ်သည်။
ထိုအချက်များမှာဂျပန်သို့သွားရန်နှင့်နေထိုင်ရန်အကြောင်းပြချက်အချို့ဖြစ်သည်။ ခရီးစဉ်အတွက်သင့်အားများစွာပေးရမည့်အရာလိုအပ်သည်ဟုကျွန်ုပ်တို့မယုံကြည်ပါ။ သင်တက်ဖို့လား
အိန္ဒိယယဉ်ကျေးမှုကိုသိကျွမ်းပြီးဟိန္ဒူလူမျိုးတို့၏ဓလေ့ထုံးစံ၊ ဘာသာရေး၊ အစွမ်းအစ၊ ပွဲတော်များနှင့်အခြားသောဟိန္ဒူယဉ်ကျေးမှုအရဓလေ့ထုံးစံများကိုရှာဖွေတွေ့ရှိပါ။
အာရှယဉ်ကျေးမှုနှင့်၎င်း၏မယုံကြည်နိုင်လောက်အောင်ထိတ်လန့်ဖွယ်ကောင်းသောဓလေ့ထုံးတမ်းများ (သို့) အာရှ၏အချို့သောနိုင်ငံများနှင့်အချို့သောနိုင်ငံများအကြောင်းကိုလေ့လာပါ။
ဗီယက်နမ်ရှိ Cu Chi ဥမင်လိုဏ်ခေါင်းများသို့လည်ပတ်မည်
ဗီယက်နမ်တွင် Cu Chi ဥမင်လိုဏ်ခေါင်းများကိုသင်မလွတ်နိုင်ပါ၊ မြေအောက်၊
ဒူရင်းယန်ကိုအဆိုးရွားဆုံးအသီးအဖြစ်သတ်မှတ်ခံထားရသည်။ ၎င်း၏အနံ့ဆိုးမှာအဘယ်နည်း။ ဒီအသီးရဲ့လျှို့ဝှက်ချက်တွေအားလုံးကိုမင်းတို့ငါတို့တွေအရမ်းဆိုးနေတဲ့အနံ့ဆိုးတွေပြောပြတယ်။
အကယ်၍ သင်တရုတ်ပြည်ကိုဘယ်လိုသွားရမလဲမသိဘူးဆိုရင် Chibna ကိုရောက်ဖို့အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းတွေဖြစ်တဲ့လေယာဉ်၊ ရထား၊
ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံရှိအကောင်းဆုံးကမ်းခြေများနှင့်ကျွန်းများ (အပိုင်း ၁)
ဖိလစ်ပိုင်ကိုသွားလျှင်သင်မလွဲနိုင်သည့်အကောင်းဆုံးကမ်းခြေများနှင့်ကျွန်းများကိုမည်သည့်အပိုင်းကရှင်းပြသည်ကိုသင့်အားပထမ ဦး စွာပို့ဆောင်ပေးပါသည်။
ဘေရွတ်သို့ခရီးစဉ်အတွင်းလည်ပတ်ရန်နေရာ ၆ နေရာ
နွေ ဦး ရာသီ hanami တက်ရောက်ရန်ဂျပန်သို့သွားပါ
နွေ ဦး ရာသီတွင်ကြာချိန်များသည်ကြာကြာနေပြီးအပူချိန်သည် ပို၍ သာလွန်ကောင်းမွန်ပြီးအရာရာတိုင်းတွင်သဘာဝကိုခံစားနိုင်သည်။
ထူးခြားဆန်းပြားသောဖိလစ်ပိုင်သို့ထွက်ပြေးရန်အကြောင်းရင်း ၇ ချက်
ဖိလစ်ပိုင်သည်ထူးခြားသည့်နိုင်ငံဖြစ်သည်။ ပထဝီအနေအထားအရသာမကယဉ်ကျေးမှုအရရော၊ ၎င်း၏ငြင်းကျော်လွန်ပြီး ...
မွန်ဂိုလီးယားသည်တစ်ချိန်တည်းတွင်ထူးခြားဆန်းပြားသောလှပသောခရီးသွား destination ည့်သည်နေရာတစ်ခုဖြစ်သည်။ သငျသညျစွန့်စားမှုတစ်ခုအသက်ရှင်ချင်လျှင်ဤတောကန္တာရ, တောင်များနှင့်လွင်ပြင်များကသင့်အားစောင့်မျှော်နေလိမ့်မည်။
ဤဆောင်းပါး၌သင်မကြာမီသင်သည်ဂျပန်သို့သွားလျှင်သိသင့်သိသင့်သောအရာ (၁၀) ခုကိုယူဆောင်လာသည်။
ဤသည် Great Wall နှင့် Terracotta Army နှင့်ပတ်သက်သည့်ဒုတိယဆောင်းပါးဖြစ်သည်။ ငါတို့ဒီစစ်တပ်အကြောင်းပြောနေတာပဲ။
မဟာတံတိုင်းကြီးနှင့်ထရကော့ကော့စစ်တပ်၊ တရုတ်သို့အလည်အပတ်ခရီး (၂) ခု
စိန့်ပီတာစဘတ်သည်နန်းတော်များကြောင့်ကျော်ကြားသည်။ သို့သော်တစ်ခုတည်း၌သာရပ်စ်တင်тинလုပ်ကြံခံရသည်။ ထိုကြောင့်သင်သည်ယူဆော့ဗ်နန်းတော်ကိုမလွတ်နိုင်ပါ။
ထိုင်းနိုင်ငံ၏မြောက်ပိုင်းမြို့တော်ချင်းမိုင်သည် Barngkok ၏ပယောဂကြောင့်ဖြစ်သည်။ သူမသည်လူသိများသည် ...
Elephant သဘာဝဥယျာဉ်၊ ထိုင်းနိုင်ငံရှိစေတနာ့ဝန်ထမ်းခရီးသွားလုပ်ငန်း
ဆင်သည်ထိုင်းနိုင်ငံ၏အထိမ်းအမှတ်တံဆိပ်ဖြစ်သည်။ ခွန်အား၊ အကာအကွယ်နှင့်ဉာဏ်ပညာကိုကိုယ်စားပြုသောတိရိစ္ဆာန်။ ထိုသို့သော ...
ပရဒိသုမှာအားလပ်ရက်အနားယူချင်ပါသလား မော်လ်ဒိုက်နှင့်ဆင်တူသည်။ ဤနေရာတွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်မတူညီသောနှုန်းထားသုံးမျိုးဖြင့်အပန်းဖြေစခန်းသုံးခုကိုချန်ထားသည်။ သင်ရွေးချယ်!
အဘယ်အရာကိုအီရန်, Shiraz တွင်ကြည့်ရှုရန်
အီရန်နိုင်ငံ၏သက်တမ်းအရင့်ဆုံးမြို့တစ်မြို့ဖြစ်သောရှီရာဇ်၏အံ့ဖွယ်ရာများကိုရှာဖွေပါ။ ဥယျာဉ်များ၊ ဂူများ၊ ဗလီများ၊ ဈေးများ၊
အီရန်နိုင်ငံသည်ကျွန်ုပ်တို့အား၎င်း၏အံ့ဖွယ်အမှုများနှင့်အံ့အားသင့်စေခဲ့သည်။ Isfahan သည်ကြီးမားသောယဉ်ကျေးမှုနှင့်ကမ္ဘာ့အမွေအနှစ်မြို့ဖြစ်သည်။ အဲဒါကိုမလည်ပတ်ဖို့စဉ်းစားမနေပါနဲ့!
ရှေးခေတ် Persepolis နှင့်၎င်း၏မြို့တော်တီဟီရန်၏နန်းတော်များနှင့်ပြတိုက်များမှ စတင်၍ အီရန်နိုင်ငံ၏ခရီးသွား tourist ည့်သည်များကိုရှာဖွေပါ။
အိန္ဒိယမှ Ayurveda, ဘဝသိပ္ပံ
ဒီနယ်လှည့်ဆောင်းပါးနဲ့အတူအိန္ဒိယရှေးဟောင်းအလေ့အကျင့်တစ်ခုဖြစ်တဲ့ Ayurveda (သို့) ဘဝသိပ္ပံပညာကိုသင်မိတ်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်။
ကြည့်ရှုစရာများလွန်းသောကြောင့် Petra သို့လည်ပတ်ခြင်းသည်အချိန်နှင့်အဖွဲ့အစည်းလိုအပ်သည်။ ထို့ကြောင့်ဤဂျော်ဒန်ဘဏ္treာကိုသိရန်အကောင်းဆုံးသောလက်တွေ့ကျသောအချက်အလက်များကိုညွှန်ပြသည်။
တရုတ် gastronomy ရှစ်အလွန်အရသာရှိတဲ့စတိုင်များ
မင်းတရုတ်ကိုသွားနေတာလား ဂန္ထ ၀ င်ဟင်းလျာရှစ်ခုရှိပေမယ့်ရာနဲ့ချီတဲ့အရသာတွေရှိတယ်ဆိုတာမင်းသိလား။ လက်ရာမြောက်တဲ့တရုတ်အစားအစာကိုစမ်းကြည့်ပါ။ မင်းလက်ချောင်းတွေကိုစုပ်လိမ့်မယ်။
တရုတ်နိုင်ငံတွင်အကြီးစားဆောက်လုပ်မှုများအတွက်အရသာကိုလူသိများသည်။ အထူးသဖြင့်ယခုအချိန်တွင်ဖြစ်သည်။ ရည်ရွယ်ချက်…
အင်ဒိုနီးရှားကိုသွားရန်နှင့်ပျော်မွေ့ရန်အကြောင်း ၅ ချက်ရှိသည်
Cebu, ဖိလစ်ပိုင်ရှိအခြားခရီးသွား option ည့်သည်
Boracay သည်ဖိလစ်ပိုင်တွင်တစ်ခုတည်းသောနေရာတစ်ခုမဟုတ်ပါ။ ရေငုပ်ခြင်းနှင့်ရေငုပ်ခြင်းအတွက် Cebu နှင့်၎င်း၏ကျွန်းများ မှလွဲ၍ အခြားမရှိပါ။
Shibam, အဆောက်အ ဦး များနှင့်အတူအလယ်ခေတ်မြို့
ယီမင်တွင်ခေတ်မီပုံရသောအလယ်ခေတ်မြို့တစ်ခုဖြစ်သောကြောင့်အဆောက်အ ဦး သည်စင်ကြယ်သောကြောင့်သင်သိပါသလော။
ဂျော်ဒန်တွင် Petra မြို့ကိုမမြင်ရဘဲသင်လိုအပ်သည်များနှင့်ဂျော်ဒန်တွင်မည်မျှလုပ်ဆောင်ရန်လိုအပ်သည်ကိုရှာဖွေပါ။
ဘာလီသို့သွားသော Tusists များပြုလုပ်သောအမှတ်တရလက်ဆောင်ပစ္စည်းများအနက်တစ်ခုမှာရိုးရာမျက်နှာဖုံးများဖြစ်ပြီးသူတို့၏အကများနှင့်အရောင်အသွေးစုံလင်။ ထူးခြားသောကခုန်ခြင်းဆိုင်ရာပြဇာတ်များကိုအနက်ဖွင့်သောအခါအကများသည်သူတို့၏မျက်နှာများကိုဖုံးလွှမ်းထားသည်။
ထိုင်းနိုင်ငံသို့သွားရန်အတွက်သိကောင်းစရာများ - ဘာလုပ်ရမည်၊
ထိုင်းနိုင်ငံသည်တစ်နှစ်လျှင် 26 ည့်သည် ၂၆ သန်းကျော်အားလက်ခံရရှိသည်။
ကမ္ဗောဒီးယားတွင် ၀ ယ်ယူရန်ဖြစ်နိုင်ချေများကိုအပြည့်အ ၀ ခံစားနိုင်သည့်ကမ္ဗောဒီးယားတွင် ၀ ယ်ယူရန်လှည့်ကွက်များနှင့်လျှို့ဝှက်ချက်များကိုသင့်အားကျွန်ုပ်တို့သင်ကြားပေးနေပါသည်။
အိန္ဒိယ - အကောက်ခွန်နှင့်ပွဲတော်များ
အိန္ဒိယသည်ရိုးရာတိုင်းပြည်တစ်ခုဖြစ်ပြီး၎င်း၏ပွဲတော်များနှင့်ဓလေ့ထုံးစံများသည်လျော့နည်းမည်မဟုတ်ချေ။ အဝေးဆုံးကနေ ...
အိန္ဒိယသည်လူ ဦး ရေအရကမ္ဘာပေါ်တွင်ဒုတိယမြောက်နိုင်ငံဖြစ်ပြီးလူ ဦး ရေ ၁,၃၂၀,၉၀၀,၀၀၀ သို့ရောက်ရှိသည်။ ဘို့…
မြန်မာနိုင်ငံတောင်ပိုင်းရှိဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်အလယ်တွင်ရှိကပ္ပလီကျွန်းများတွင် Sentinelese လူမျိုးသည်နှစ်ပေါင်း ၇၀၀၀ ကျော်နေထိုင်ခဲ့ကြပြီးတစ် ဦး နှင့်တစ် ဦး အသိရဆုံးကုန်သွယ်ရေးရေကြောင်းလမ်းကြောင်းတစ်လျှောက်တွင်ရှိနေသော်လည်း၎င်းတို့သမာဓိနှင့်ဓလေ့ထုံးတမ်းများကိုထိန်းသိမ်းခဲ့သည် ။
တရုတ် - အမျိုးသမီးများ၏အခန်းကဏ္,၊ ပုံမှန်ဝတ်စုံနှင့်ရိုးရာအားကစား
လက်ရှိတရုတ်ယဉ်ကျေးမှု၏မူလအစ - အမျိုးသမီးများ၏အခန်းကဏ္,၊ ပုံမှန်ဝတ်စားဆင်ယင်ပုံနှင့်ရိုးရာအားကစားအချို့တို့ကိုလေ့လာပါ။
အမ်မန်သည်အရှေ့အလယ်ပိုင်းရှိအနောက်တိုင်းတွင်အနောက်ဘက်အ ၀ င်ဆုံးမြို့တစ်မြို့ဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့်၎င်းထံလည်ပတ်ရန်နှင့်၎င်း၏ဘဏ္treာများကိုရှာဖွေရန်မတွန့်ဆုတ်ပါနှင့်။
ပေကျင်း၏ကျော်ကြားသော Donghuamen ညစျေးသည်ပိတ်
စပိန်နှင့်အနီးအနားရှိအင်းဆက်ပိုးမွှားများကိုစားခြင်းသည်ကျွန်ုပ်တို့အတွက်တကယ့်ရှုပ်ထွေးသောအလားဖြစ်သည် ဒါပေမယ့်အဖြစ်မှန်က ...
မကြာခဏရှေးဟောင်းကမ္ဘာ၏အthe္ဌမအံ့ as ခြင်းအဖြစ်ရည်ညွှန်း, Petra ဂျော်ဒန်ရဲ့အဖိုးတန်ဆုံးရတနာနှင့်၎င်း၏ ...
အိုဆာကာသည်ပျင်းစရာမကောင်းပါ။ ထိုတွင်ရဲတိုက်၊ တူးမြောင်းများ၊ ဈေးဆိုင်များနှင့်အလွန်များပြားလှသည့်ညများရှိသည်။
အိန္ဒိယတွင်သင်သွားရောက်ကြည့်ရှုနိုင်မည့်အကောင်းဆုံးနေရာများနှင့်လှုပ်ရှားမှုများ၊ မှော်အရိပ်များနှင့်သင်အမြဲတမ်းအမှတ်ရမည့်ထူးခြားသည့်ဆွဲဆောင်မှုများကိုရှာဖွေပါ။ မင်းဘယ်သူလဲသိလား
တရုတ်နိုင်ငံ၏မှော်အရေအတွက်ကဘာလဲ၊ ဘာအဓိပ္ပါယ်လဲ။ ဘာကြောင့်တရုတ်မှာအထူးနံပါတ်တစ်ခုရှိနေတာလဲဆိုတာရှာပြီးသင့်အတွက်ကံကောင်းသောနံပါတ်ဟုတ်မဟုတ်သိနိုင်ပါတယ်။
ဟီရိုရှီးမားသည်အနုမြူဗုံး၏မြို့တော်ဖြစ်သည်။ သုံးရက်ရှိလျှင်သင်မလွတ်နိုင်ပါ။ အဲဒါကိုမမေ့နိုင်ပါဘူး
လွတ်လပ်မှုကိုရှာဖွေလား။ အာရှတိုက်ရှိ Nudism
အဝတ်မပါဘဲနေပူရန်အာရှရှိအကောင်းဆုံးဝတ်လစ်စလစ်ကမ်းခြေများကိုရှာဖွေပါ။ ထိုင်း၊ အိန္ဒိယ (သို့) ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံသည်အနှစ်သက်ဆုံးနေရာများဖြစ်သော်လည်း၎င်းတို့ကိုရှာဖွေတွေ့ရှိပါ။
Mirissa သည်ဝေလငါးများ၊ လင်းပိုင်များနှင့်အခြား cetaceans များကိုနှစ်သက်သူများအတွက်ထင်ရှားသောနေရာတစ်ခုဖြစ်သည်။ နောက်လိုက်များပိုများလာသည့်ခရီးသွား attr ည့်ဆွဲဆောင်။
Sago Gula Melaka, မလေးရှားအမျိုးသားအချိုပွဲ
မလေးရှားနိုင်ငံရဲ့ပုံမှန်အချိုပွဲတွေကဘာလဲ။ Sago သည်ထင်ရှားသောလက္ခဏာဖြစ်သည်။ သို့သော်သင်၏အစားအစာတွင်အချိုပွဲအတွက်ကြိုတင်ပြင်ဆင်ရန်သကြားလုံးများစွာရှိသည်။
သီရိလင်္ကာနိုင်ငံ၏အကောင်းဆုံးအဲလာ (အပိုင်း ၁)
သူမသည် Badulla ခရိုင်တွင်တည်ရှိပြီးပင်လယ်ရေမျက်နှာပြင်အထက် ၁၀၅၀ မီတာအမြင့်တွင်ရှိသည်။ ကိုလံဘိုနှင့်ကန်ဒီ (နိုင်ငံ၏အဓိကမြို့များ) နှင့်ချိတ်ဆက်ထားသည်
သူတို့၏ယဉ်ကျေးမှု၊ ပတ်ဝန်းကျင်သို့မဟုတ်သမိုင်းကြောင့်နှစ်စဉ်အလည်အပတ်အများဆုံးရရှိသောအာရှနိုင်ငံများကိုရှာဖွေပါ။ သူတို့အားလုံးသိလား သူတို့ကိုရှာဖွေပါ!
Toshogu ဘုရားကျောင်း: ပညာရှိမျောက် ၃ များ၏သန့်ရှင်းရာဌာန
နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းသန်းနှင့်ချီသောကမ္ဘာလှည့်ခရီးသည်များကိုကြိုဆိုသည့်ပညာရှိမျောက်သုံးကောင်၏ Sanctuary အဖြစ်လူသိများသောဂျပန်ရှိ Toshogu ဘုရားကျောင်းသို့သွားပါ။ အဘယ်အရာကဤမျှထူးခြားစေသနည်း။
Jatinga တွင်ငှက်များအဘယ်ကြောင့်သတ်သေကြသနည်း။ ငှက်ရာပေါင်းများစွာသေဆုံးခြင်းနှင့်အတူနှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းထပ်ခါတလဲလဲပြုလုပ်လေ့ရှိသည့်အလွန်အမင်းရှားပါးသောအဖြစ်အပျက်
ကမ္ဘာအနှံ့ရှိဤထူးခြားသောဗိမာန်တော်၏အခန်းအရေအတွက်၊ ဇာစ်မြစ်နှင့်အတွေးအခေါ်၊ ပတ္တရားရှိသန့်ရှင်းရာဌာန၏လျှို့ဝှက်ချက်များအားလုံးကိုကျွန်ုပ်တို့အားကျွန်ုပ်တို့သင်ကြားပေးပါသည်။
မင်းရဲ့တရုတ်ခရီးကိုစီစဉ်လား။ အများအားဖြင့်တရုတ်အမှတ်တရလက်ဆောင် ၇ ခုကိုရှာဖွေပါ။ သင်၏သူငယ်ချင်းများနှင့်မိသားစုကိုအံ့အားသင့်စေမည့်စိတ်ကူးလက်ဆောင်တစ်ခု။
ယော်ဒန်မြစ်တလျှောက်ပက်ထရာ (သို့) ပင်လယ်သေတို့ထဲ၌သင်လက်လွတ်မသွားသင့်သည့်နေရာငါးခုကိုကျွန်ုပ်တို့ပြသပါသည်။ သို့သော်ထိုထက်မကသောအရာများရှိသည်။
ပုံမှန်ကမ္ဘောဒီးယားအစားအစာကိုရှာဖွေပြီးပုံမှန်ကမ္ဘောဒီးယား gastronomy နှင့် ပတ်သက်၍ သင်တွေ့လိမ့်မည်သော gastronomic အကြံပြုချက်များနှင့်ချက်ပြုတ်နည်းများကိုပြင်ဆင်ပါ။
ကမ္ဘောဒီးယား၏ကျွန်းများနှင့်ကမ်းခြေများ - Kep, Koh Tonsay နှင့် Sihanoukville
ငါတို့ကသင့်အားကမ္ဘောဒီးယားရှိအကောင်းဆုံးကျွန်းများနှင့်ကမ်းခြေများ၏လျှို့ဝှက်ချက်များကိုထုတ်ဖော်ပြသခဲ့သည်။ Kep, Koh Tonsay နှင့် Sihanoukville ကိုယ့်ကိုယ်ကိုဆုံးရှုံးရန်ကောင်းကင်နေရာများ။
Luzon, ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံရှိအကြီးဆုံးကျွန်းဖြစ်သည့်ကမ်းခြေများ၊ မီးတောင်များ၊ မြို့တော်၊ စျေးများနှင့်အခြားအရာများရှာဖွေတွေ့ရှိရန်မှော်အတတ်အများအပြားကိုဖုံးကွယ်ထားသည်။
ခရီးသွားများကြားလူကြိုက်များမှုနှင့်စျေးနှုန်းအရအာရှတွင်အထင်ရှားဆုံးသောခရီးသွား inations ည့်သည်များကိုကျွန်ုပ်တို့ရှာဖွေတွေ့ရှိသည်။ သင်ပြည်မသို့သွားလျှင်၎င်းကိုလက်လွတ်မသွားပါစေနှင့်။
သီရိလင်္ကာ၌အကောင်းဆုံး Safari Minneriya
Minneriya သည်သီရိလင်္ကာနိုင်ငံ၏အကြီးဆုံးဥယျာဉ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်နိုင်ငံ၏အလယ်ပိုင်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းတွင်တည်ရှိပြီး9000ရိယာ ၉၀၀၀ ရှိသည်
Suicide Forest သည်ဂျပန်နိုင်ငံဖူဂျီတောင်တောင်စောင်းတွင်တည်ရှိသည်။ လူတွေကိုယ့်ကိုယ်ကိုသတ်သေတဲ့လျှို့ဝှက်ဆန်းကြယ်တဲ့နေရာ။
တောင်ကိုရီးယားရှိအကောင်းဆုံးနှင့်အကျော်ကြားဆုံးခရီးသွား tr ည့်ရထား ၂ စီးကိုကြည့်ပါ
အင်ဒိုနီးရှား၏ဓလေ့ထုံးစံများကိုကျွန်ုပ်တို့ရှာဖွေတွေ့ရှိသည်။ ပါတီများ, ဘာသာတရား, အဝတ်အစား, gastronomy နှင့်ပိုပြီး။ အင်ဒိုနီးရှားယဉ်ကျေးမှုကိုမလွတ်ပါစေနဲ့။
ဘန်ကောက်မှာလိင်တူချစ်သူဘ ၀ ရဲ့အကောင်းဆုံး
Gulhi, အဘယ်သူမျှမ - ရိုးရှင်းသော Maldives
ဂူလီသည်နိုင်ငံ၏မြို့တော်မာလီနှင့် Kaafu Atoll ၏တောင်ဘက်ပိုင်းမှကီလိုမီတာအနည်းငယ်အကွာတွင်တည်ရှိသည်။ လူ ဦး ရေ ၁၀၀၀ အောက်သာရှိသည်။
Panda ထမ်းရွက်: ချစ်ခြင်းမေတ္တာနှင့်ကြောက်မက်ဘွယ်သောအကြား
Palmyra ကို ၁၉၈၀ ပြည့်နှစ်တွင်ကမ္ဘာ့အမွေအနှစ်အဖြစ်ကြေငြာခဲ့သည်။ သဲကန္တာရအလယ်တွင်ရှိပြီးအိုအေစစ်ဘေးတွင်တည်ရှိပြီး၎င်းကိုထိန်းသိမ်းထားဆဲအရေးကြီးဆုံးရှေးဟောင်းသုတေသနအကြွင်းအကျန်တစ်ခုဖြစ်သည်။
Lipton ၏ထိုင်ခုံ၊ သီရိလင်္ကာ၌လက်ဖက်ရည် Olympus
Lipton ၏ထိုင်ခုံ၊ သီရိလင်္ကာ၌လက်ဖက်ရည် Olympus ။ ကမ္ဘာပေါ်ရှိအရေးအကြီးဆုံးလက်ဖက်စိုက်ခင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ လက်ဖက်ရည်အမျိုးမျိုးထုတ်လုပ်သူများ။
Boracay ကိုဘယ်လိုသွားရမလဲ။ လေကြောင်း၊
Boracay ကိုသွားဖို့စဉ်းစားနေပါသလား။ ဖိလစ်ပိုင်ရှိဤပရဒိသုနေရာသို့သင်သွားရမည့်လေ၊ ပင်လယ်၊
သင်သည်ကမ္ဘောဒီးယားသို့သွားရန်စီစဉ်ထားပါကထိုဒေသ၏ပုံမှန်အဝတ်အစားနှင့်အဝတ်အစားများကိုသင်သိရခြင်းမှာစိတ်ဝင်စားစရာဖြစ်သည်။ သူတို့ဘယ်လိုကမ္ဘောဒီးယားမှာဝတ်စားဆင်ယင်ကြသလဲ ရှာတွေ့သည်။
မင်းအာရှကိုသွားနေသလား မင်းတို့ဟာသူတို့ရဲ့ရှုခင်းနဲ့မဖြစ်နိုင်တဲ့မြင်ကွင်းတွေကိုခံစားနိုင်ဖို့တိုက်ကြီးပေါ်ကအကြီးဆုံးသဲကန္တာရခြောက်ခုကိုငါတို့ရှာဖွေတွေ့ရှိတယ်။ မင်းအဲဒါကိုလက်လွတ်မသွားဘူးလား။
အိန္ဒိယလူ့အဖွဲ့အစည်းရဲ့ဓလေ့ထုံးစံတွေ၊ အာရှနိုင်ငံသားတွေကိုဘယ်လိုဖွဲ့စည်းထားသလဲ။ ရှာတွေ့သည်!
မင်းတို့ထိုင်းနိုင်ငံရဲ့ဓလေ့ထုံးစံတွေအကြောင်းပြောပြမယ် သူတို့ဘယ်လိုတစ် ဦး ကိုတစ် ဦး နှုတ်ဆက်ကြတာလဲဒါမှမဟုတ်ဒီအာရှနိုင်ငံမှာဘယ်ပါတီတွေကျင်းပကြတာလဲ။ ၎င်းသည်သင်၏အာရုံကိုဆွဲဆောင်သောကြောင့်၎င်းကိုလက်လွတ်မသွားပါနှင့်။
Tokyo - Nozomi Super Express Shinkansen မှကျိုတို
တိုကျို - ကျိုတိုခရီးကိုဂျပန်ကျည်ဆန်ရထား (သို့မဟုတ်) Shinkansen ပေါ်တွင်၎င်း၊ ထိုတွင်ခေါ်တွင်သောနာမည်ပေးသည်။
အာရှနှင့်ပစိဖိတ်သမုဒ္ဒရာသို့ခရီးထွက်ရာတွင်သင်မလွဲမရှောင်သာရှိသောသမိုင်း၊ ယဉ်ကျေးမှု၊ ပထဝီဝင်အနေအထား၊
မင်းတို့ဗီယက်နမ်မှာအကောင်းဆုံးကမ်းခြေတွေကိုပြသပြီးတော့မင်းတို့အားလုံးကိုကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်။ အာရှတိုက်တွင်သဲနှင့်ပင်လယ်ပရဒိသုများသည်သင့်ကိုစောင့်မျှော်နေသလား၊ သင်သိလိုပါသလော။
တရုတ်ပြည်မှ Gorges Dam ၃ ခု
ဆည်ကြီး ၃ ခုသည်တရုတ်အင်ဂျင်နီယာ၏ခေတ်သစ်အံ့ဖွယ်ရာများထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းရဲ့လျှို့ဝှက်ချက်တွေကိုရှာဖွေပါ
လာအိုသည်ရှာဖွေတွေ့ရှိရန်အရှေ့တောင်အာရှ၏နောက်ဆုံးကြီးမားသောလျှို့ဝှက်ချက်ဖြစ်သည်။ ဂေဟဗေဒ၊ ၀ ိညာဉ်ရေးရာနှင့်ယဉ်ကျေးမှုများစွာရှိသည်။ ဆင်တစ်သန်း၏ပြည်သည်သင့်ကိုစောင့်မျှော်နေ၏။
အိန္ဒိယတွင် pashminas ဝယ်ပါ
Lotus အဆောက်အအုံ, Wujin ရှိကြာပန်းပုံစံ
မလေးရှား - ခရီးသွား for ည့်များအတွက်အဝတ်အစားကုဒ်
Terengganu ၏ Sultanate သည်မလေးရှားနိုင်ငံ၏အနောက်ပိုင်းရှိပြည်နယ်တစ်ခုဖြစ်သောတားမြစ်ထားသော ၀ တ်စားဆင်ယင်မှုအသစ်ကို ...
စိန့်ပီတာစဘတ်မြို့၏ Hermitage ပြတိုက်၌လှပသော Peacock Clock နာရီဖြစ်သည်
ဒိုဟာမြို့ရှိကာတာပုလဲ၊ အနောက်ဘက်ပင်လယ်ကမ်းခြေကမ်းခြေအတုကျွန်းပေါ်တွင်တည်ဆောက်နေသည့်ဇိမ်ခံလူနေအဆောက်အအုံဖြစ်သည်။ ဒိုဟာ
အိုမန် - ခရီးသွား for ည့်များအတွက်အဝတ်အစားကုဒ်
Mitako ကျွန်းများ၏ကမ်းခြေ၊ ဂျပန်၊ အိုကီနာဝါရှိကမ်းခြေများ
အာရှ၌ကေဘယ်လ်ကားများစွာရှိသည်။ သို့သော်တရုတ်နိုင်ငံ၊ ယူရှန်မြို့တွင်တွေ့ရမည့်အရာများမှာကမ္ဘာပေါ်တွင်အန္တရာယ်အရှိဆုံးသောကေဘယ်လ်ဖြစ်သည်။
မိုးသည်းထန်စွာရွာသွန်းခြင်းထက် ပို၍ ကောင်းသည်မှာကောင်းကျိုးတစ်ခုဖြစ်သည်။ အချို့သောနေရာများကိုစိတ်ကူးယဉ်ဆန်ဆန်အတွေးအခေါ်များဖြင့်ရေချိုးပေးသောလေထုဖြစ်စဉ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ အကယ်၍ သင်သည်ထိုအရာများထဲမှတစ်ယောက်ဖြစ်ခဲ့လျှင်၊ အိန္ဒိယရှိ Mawsynram မြို့ကိုနှစ်စဉ်ပျမ်းမျှပျမ်းမျှ ၁၁,၈၇၁ မီလီမီတာဖြင့်မိုးရွာဆုံးရွာကိုမသွားနိုင်ပါ။
Tour Langwaki ကျွန်း၊ မလေးရှားပရဒိသု
အပင်တစ်ပင်သည်နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံ၏အရေးအကြီးဆုံးခရီးသွား attractions ည့်ဆွဲဆောင်များထဲမှတစ်ခုဖြစ်လာရန်မည်သို့ဖြစ်နိုင်သနည်း။ အဖြေရရန်သင်နှစ်ပေါင်း ၂၀၀ ကျော်အိန္ဒိယနိုင်ငံ၊ ကလက်ကတ္တားမြို့အနီး၊ ဟော့ရာမြို့ရှိရုက္ခဗေဒဥယျာဉ်တွင်ကြီးထွားလာသောကြီးမားသောသင်္ဘောသဖန်းပင်ကြီးဂရိတ်ဘန်ယန်သို့သင်သွားရမည်။
Yazd, Iran ရှိတိတ်ဆိတ်မှုမျှော်စင်
အီရန်နိုင်ငံ Yazd မြို့ရှိနှုတ်ဆိတ်နေသည့်မျှော်စင်ဟုခေါ်သည့်အရာသည်နှစ်ပေါင်း ၃၀၀၀ ကျော်ကြာသည့်အစဉ်အလာ၏နေရာဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်ပျောက်ကွယ်လုနီးပါးဖြစ်သော်လည်းယနေ့တိုင်အသက်ရှင်ခဲ့သည်။ အတော်လေးမကြာသေးမီအချိန်အထိ, နေနှင့်သဲကန္တာရလင်းယုန်များကစားသုံးရန်အသေကောင်၏အလောင်းများကိုသူတို့ကိုအပေါ်ထားကြ၏။
ထိုင်ဝမ်မှာနွေရာသီအားလပ်ရက်အပန်းဖြေချင်ပါသလား ထိုင် ၀ မ်ကမ်းခြေများနှင့်ပျော်မွေ့ရန်အကောင်းဆုံးအချိန်သည် ...
Nanpu တံတား, ရှန်ဟိုင်းအတွက်အံ့မခန်းတံတား
မြစ်တစ်စင်းကိုဖြတ်ကူးသည့်မြို့တစ်မြို့၏အရေးပါမှုကိုအသိအမှတ်ပြုရန်ကောင်းသောနည်းလမ်းမှာတံတားများ၏အရွယ်အစားနှင့်အရွယ်အစားကိုတိုင်းတာရန်ဖြစ်သည်။ ရှန်ဟိုင်းတွင်မူဟန်ဖူမြစ်၏ကျယ်ပြန့်သောတံတားဖြစ်သော Nanpu တံတားကိုသာကြည့်လိုက်ပါ။
ထိုင်းနိုင်ငံရှိ Wat Samphran ဘုရားကျောင်းကိုဖက်ထားသောနဂါး
စိတ်ဝင်စားဖွယ်ကောင်းသောဘန်ကောက်မြို့တော်ကိုမြင်တွေ့ရသမျှများစွာသောခရီးသွား by ည့်သည်များအထူးသဖြင့်ထိုင်းနိုင်ငံ၏မြို့တော် Wat Samphran ကဲ့သို့သောထိုင်းနိုင်ငံ၏မြို့ပြလမ်းပြများ၌တွေ့ရခဲသောစိတ်ဝင်စားဖွယ်အချက်များကိုသတိမပြုမိဘဲဖြစ်နေသည်မှာပုံမှန်ဖြစ်သည်။
အင်ဒိုနီးရှားရှိဘာလီကျွန်း၏အလယ်ဗဟိုတောတွင်းပုန်းအောင်းရာစုနှစ်များစွာကရှေးဟောင်းဗိသုကာအဆောက်အအုံတစ်ခုဖြစ်ပြီး၎င်းသည်အရေးကြီးသောဂေဟဗေဒဆိုင်ရာသန့်ရှင်းရာဌာနဖြစ်သည်။ ကျနော်တို့က "မျောက်များ၏သစ်တော" ဟုလည်းခေါ်သော Mandala Wisata Wenara Wana အကြောင်းပြောနေသည်။
Ming Yongze သည်တရုတ်နိုင်ငံရှိ Yangtze မြစ်၏မြောက်ဘက်ပိုင်းတွင်တည်ရှိပြီးမြို့တော် Fengdu ဖြစ်သည်။ ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းမှခရီးသွားများအထူးသဖြင့်နိုင်ငံ၏အခြားဒေသများမှနိုင်ငံသားများကိုဆွဲဆောင်သောလျှို့ဝှက်ဆန်းကြယ်သောနေရာတစ်ခုဖြစ်သည်။ နောက်ပြီးဒီနေရာဟာတရုတ်လူမျိုးတွေရဲ့သရဲ၊ ယဉ်ကျေးမှုတွေ၊ နောင်ကာလတွေအကြောင်းလေ့လာဖို့အကောင်းဆုံးနေရာဖြစ်တယ်။
Seagaia Ocean Dome, ဂျပန်နိုင်ငံ၏အကြီးဆုံးသောလူလုပ်ကမ်းခြေ
၎င်းသည်လမ်းကြောင်းသစ်ဖြစ်သည်။ လူလုပ်ကမ်းခြေများသည်ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းတွင်လူကြိုက်များလျက်ရှိသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်မိုနာကို၊ ဟောင်ကောင်၊ ပဲရစ်၊ ဘာလင်၊ ရော့တာဒမ်သို့မဟုတ်တိုရွန်တိုကဲ့သို့ကွဲပြားသောနေရာများတွင်ရေချိုးပြီးစီးနိုင်သည်။ သို့သော်ဂျပန်၊ Miyazaki မြို့ရှိ Seagaia Ocean Dome ကဲ့သို့အံ့မခန်းဖွယ်ရာကြီးမားလှသည်။ ကမ္ဘာပေါ်မှာအကြီးဆုံး။
ရုရှားသို့ခရီးစဉ်မှပုံမှန် matryoshka ကိုခရီးဆောင်အိတ်ထဲယူဆောင်။ မရခြင်းသည်မဖြစ်နိုင်ပါ။ ဤအစဉ်အလာရုပ်များသည်ဂန္ထဝင်အမှတ်တရလက်ဆောင်နှင့်မူလလက်ဆောင်ဖြစ်သည်။ ၎င်း၏အားပြည့်အတွင်းပိုင်းသည်သေးငယ်သည့်အရုပ်များ၏အဆုံးမဲ့ဆက်ခံမှုကိုဖုံးကွယ်ထားရန်ကူညီသည်။ စည်းမျဉ်းတစ်ခုသာရှိသည် - အရုပ်အရေအတွက်အမြဲတမ်းမတူရ။
နီပေါနိုင်ငံရှိ Kusma Gyadi ယာယီတံတား
ပါကစ္စတန်နိုင်ငံ၊ နီပေါနိုင်ငံအလယ်ပိုင်းရှိ Parbat မြို့အနီးတွင်အမြင့်ကိုမုန်းသောသူတို့အတွက်စစ်မှန်သောစမ်းသပ်မှုတစ်ခုရှိသည်။ (နီပေါနိုင်ငံ၊ Kushma-Katuwachaupari) Kusma Gyadi ယာယီတံတား (လေဟာနယ်အထက်တွင် ၃၄၅ မီတာ) မြင့်သည်။
ဤအခါသမယတွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်တောင်ဘက်တောင်ပိုင်း၊ ကန်တိုနယ်မှ အစပြု၍ အစာအိမ်နှင့်ဆိုင်သောအစားအစာအကြောင်းပြောရန်သွားမည်။
အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံဂျာဗားပြည်နယ်အနောက်ဘက်ရှိ Kapetakan မြို့ငယ်သည်ဖိနပ်၊ ခါးပတ်၊ ပိုက်ဆံအိတ်များ၊ အိတ်များနှင့်မြွေများမှပြုလုပ်သောအခြားအရာများထုတ်လုပ်ရန်အတွက်အရေးကြီးဆုံးသောနေရာတစ်ခုဖြစ်သည်။ ဤတွင်ကမ္ဘာဂြိုဟ်၏အခြားနေရာများတွင်မုန်းသောမြွေများသည်တန်ဖိုးရှိသောကုန်ကြမ်းများဖြစ်သည်။ အရေပြားမှအရေပြားကိုအသုံးပြုသည်၊ အရေပြားရောဂါများ၊ ပန်းနာရင်ကျပ်ရောဂါသို့မဟုတ်အားနည်းခြင်းတို့ကိုကုသရန်ရိုးရာကုထုံးများအတွက်အသားနှင့်အရိုးများကိုလည်းအသုံးပြုသည်။
Dura Europos, ကမ္ဘာ့အသက်အကြီးဆုံးတရားဇရပ်နှင့်ဘုရားကျောင်း
ဆီးရီးယားရှိ Dura Europos
Huangluo, တရုတ် - ကမ္ဘာပေါ်တွင်ဆံပင်အရှည်ဆုံးအမျိုးသမီးများ
ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းလုံးတွင်အမျိုးသမီးများသည်လှပသောဆံပင်ရှိခြင်းကိုစိုးရိမ်ကြသည်။ သို့သော်တရုတ်နိုင်ငံရှိ Yao Huangluo အမျိုးသမီးများအတွက်မူထိုအရာသည်အခြားအကြောင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ ဆံပင်သည်သူတို့၏တန်ဖိုးအရှိဆုံးအရာဖြစ်ပြီးသူတို့သေဆုံးသည်အထိကြီးထွားစေရန်သူတို့၏ဘဝတစ်လျှောက်လုံးဂရုစိုက်သောဘဏ္thatာတစ်ခုဖြစ်သည်။
Laolongtou: Great Wall ပင်လယ်နဲ့တွေ့ဆုံတဲ့နေရာ
ဒီနေရာမှာတရုတ်ပြည်ရဲ့မဟာတံတိုင်းအကြောင်းအကြိမ်ကြိမ်ပြောခဲ့ဖူးတယ်၊ သူ့ရဲ့တိုးချဲ့မှု၊ ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ရေးအခြေအနေ၊ ဘယ်နေရာကိုသွားရမလဲ။ ရှာဖွေရန်, ငါတို့ဘေဂျင်း၏အရှေ့ဘက်ကီလိုမီတာ 300 ခန့်, Qinhuangdao ပြည်နယ်ရှိ Shanghaiguan, သို့သွားရမည်။
Fujisan (သို့) Fujiyama ဟုလည်းလူသိများသော Fuji Mount သည် ၃,၃၇၆ မီတာအမြင့်ရှိပြီးဂျပန်တစ်နိုင်ငံလုံးတွင်အမြင့်ဆုံးဖြစ်သည်။
Aokigahara သည် Fuji တောင်ခြေတွင်တည်ရှိပြီးကြောက်မက်ဖွယ်ကောင်းသောနာမည်ကြီးသည့်ထူထပ်။ မှောင်မိုက်သောသစ်တောဖြစ်သည်။ ဂျပန်နိုင်ငံတွင် Wataru Tsurumui ၏ရောင်းအားအကောင်းဆုံးဖြစ်သော "Complete Suicide Manual" ကြောင့်၎င်းကို "သေဖို့အကောင်းဆုံးနေရာ" ဟုလူသိများသည်။ တိုင်းပြည်အတွင်းရှိအေးအေးဆေးဆေးဆုံးနေရာများထဲမှတစ်ခုဖြစ်ပြီး၎င်းသည်စပ်စုသော visitors ည့်သည်အနည်းငယ်ကိုဆွဲဆောင်နိုင်သည်မှာသေချာသည်။
Amritsar ၏ရွှေဘုရားကျောင်း, အိန္ဒိယရှိရတနာ
အန္တရာယ်ရှိသောလမ်းကြောင်းတစ်ခု - ထိုင်းနိုင်ငံတွင်ဆင်အသားသည်တိုင်းပြည်ရှိစားသောက်ဆိုင်တိုင်းနီးပါး၏ကြယ်ပွင့်ပန်းကန်ဖြစ်လာသည်။ ဆင်သည်ဝက်ကဲ့သို့ပင်ဆင်သည်ပင်စည်မှသည်လိင်အင်္ဂါမှအရာခပ်သိမ်းကိုအသုံးချသည်။ မဟုတ်ပါ၊ ၎င်းသည်မျိုးစိတ်များ၏ရှင်သန်မှုကိုခြိမ်းခြောက်သောဟာသတစ်ခုမဟုတ်ပါ။
Guangzhou (Canton) သည်တရုတ်နိုင်ငံ၏တတိယအကြီးဆုံးမြို့ဖြစ်ပြီးမကြာသေးမီနှစ်များအတွင်း Beijing ည့်သည်အရေအတွက်အားဖြင့်ပေကျင်းနှင့်ရှန်ဟိုင်းတို့နှင့်အမီလိုက်သည်။ ဟောင်ကောင်နှင့်မကာအိုမှနှစ်နာရီသာဝေးသောနေရာသည်အာရှသို့ခရီးသွား by ည့်သည်များပိုမိုနှစ်သက်သောနေရာတစ်ခုဖြစ်လာသည်။ ဒီမှာမြို့ကိုအမြန်လမ်းပြပါ
တိုကျို Ginza ရှိ Vampire Caféဆိုင်
တိုကျိုရှိ Ginza ၏ရပ်ကွက်အတွင်းအလွန်အမင်းကြမ်းကြမ်းတမ်းတမ်းနှင့်အလွန်ကြောက်စရာကောင်းသည့်နေရာတစ်ခုရှိသည်။ Count Dracula ၏ခေါင်းတလားပင် Vampire Caféသည်လက်ဝါးကားတိုင်များ၊ ဦး ခေါင်းခွံများ၊ မြွေဆိုးများနှင့်အလှဆင်ထားသော gothic စားသောက်ဆိုင်အကြောင်းပြောနေခြင်းဖြစ်သည်။
Ur-Nammu မှ Ziggurat: အီရတ်ရှိဆူမားရီးယားပိရမစ်
အီရတ်မှာရှေးခေတ်ဘာသာရေးဌာနကိုငါတို့တွေ့ခဲ့တယ်ဆိုတာမင်းသိလား ဟုတ်ပါတယ်၊ Ur-Nammu မြို့၏ Ziggurat၊
သမိုင်းတစ်လျှောက်တွင်ပါရှားအစားအစာသည်ကမ္ဘာပေါ်တွင်အရသာအရှိဆုံးနှင့်အသန့်ရှင်းဆုံးအရာတစ်ခုဖြစ်သည်ဟုယူမှတ်ခဲ့ကြသည်။ ယနေ့အီရန်၏အစားအစာသည်ကိလေသာစိတ်ကိုနိုးထစေပြီးတိုင်းပြည်သို့လာရောက်ရန်အလွန်ပင်ဆွဲဆောင်မှုတစ်ခုဖြစ်သည်။ မြို့ကြီးများနှင့်မြို့ငယ်များအားလုံး၌ပုံမှန်စားသောက်ဆိုင်များတွင်ငွေနည်းနည်းဖြင့်သင်စားနိုင်သည်။ အသေးစားနှင့်ပျူငှါနွေးထွေးသောရိုးရာစားသောက်ဆိုင်များနှင့်ထူးခြားသည့်လက်ဖက်ရည်ဆိုင်များသည်အလွန်ကောင်းမွန်သောဟင်းလျာများကိုမြည်းစမ်း။ ရိုးရာတိုင်းပြည်၏ဂီတကိုနားထောင်ရန်အကောင်းဆုံးနေရာဖြစ်သည်။
ကမ္ဘာပေါ်တွင်လူကြိုက်အများဆုံးနှင့်လူသိအများဆုံးအရှေ့တိုင်းဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းများအနက်တစ်ခုမှာဘုရားဖြစ်သည်။ အာရှတစ်လွှားတွင်လက်ရှိတည်ရှိပြီးရင်းရင်းနှီးနှီးပြန်သည် ...
ဆင်၊ ကျား၊ အပြေးပြိုင်ပွဲ ... ကလေးများသည်လူကြီးများကဲ့သို့အိန္ဒိယနှင့်သူတို့၏စိတ် ၀ င်စားမှုကိုခံစားနိုင်သည်။ နောက်ဆုံးတွင်ကျွန်ုပ်တို့သည် Mowgli ၏နိုင်ငံတွင်ရှိသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ကလေးများနှင့်အတူအိန္ဒိယသို့ခရီးသွားခြင်းသည်မိမိတို့ကိုယ်ကိုမည်သို့စုစည်းရမည်၊ ကျွန်ုပ်တို့၏နေရာများကိုကောင်းစွာရွေးချယ်ပြီးအနိမ့်ဆုံးဘုံသဘောအရမည်သို့သိမည်ဆိုလျှင်ပြaနာမရှိပါ။ ဒီနေရာမှာအတွေးအခေါ်အချို့။